Maxay Yihiin Makiinadaha Raadinta ... | Martech Zone
Waa maxay Makiinadaha Raadinta Akhriso…
Axad, Febraayo 3, 2008 Khamiista, Oktoobar 29, 2015 Douglas Karr
Raadinta makiinadaha raadinta bogagga leh algorithms adag oo culeyskoodu yahay tan oo isbeddello kala duwan ah, labadaba gudaha iyo dibedda boggaaga. Waxaan u maleynayaa inay muhiim tahay in la aqoonsado waxa walxaha muhiimka ah ee Mashiinnada Raadintu ay fiiro gaar ah u leeyihiin, in kastoo. Intooda badani waa xubno aad si buuxda gacanta ugu hayso marka aad qorsheyneyso ama aad naqshadeynayso boggaaga ama aad si fudud u qoreyso boggaaga. Tani waa iyada oo aan loo eegin haddii ay tahay bogga caadiga ah ee buug-yaraha suuq-geynta, baloog, ama goob kale.
Waxyaabaha Muhiimka u ah Waxkaqabadista Mashiinka Raadinta
Kahor inta SEO-yada aqriya qoraalkayga ay i kala jeexjeexayaan - Halkaas ayaan ku tuuri doonaa afeef… tani waa qayb uun ka mid ah waxa uu khabiir SEO ahmiyad siin doono markuu fiirinayo iyo hagaajinta bartaada. Waxaa jira, dabcan, arrimo kale sida meta tags, Meelaynta HTML, iyo goobta caan. Ujeeddadaydu waa si fudud in la sameeyo celceliska websaydhka soo-saaraha ama milkiilaha ganacsiga oo ka warqaba qaar ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee si fudud wax looga beddeli karo.
The cinwaanka bogaggaaga waxay saameyn ku yeelan doontaa sida ugu wanaagsan ee bogga loo muujiyey. Hubso inaad u isticmaasho ereyada muhiimka ah cinwaankaaga bogga oo aad dhigatid balooggaaga ama cinwaanka boggaaga sare.
Your magaca domain saamayn ku yeelashadaada Haddii aad rabto meelaynta ugu sarreysa ee ereyada muhiimka ah ama weedhaha, ka fikir ka mid noqoshada magacaaga domain.
Dhaji slugs waa muhiim waana loo isticmaali karaa in looga faa'iideysto ereyada muhiimka ah iyo weedhaha. Waxaan isku dayaa inaan adeegsado cinwaan soo jiidasho leh oo soo jiita aqristaha laakiin isweydaarsigeyga boostada waxaa badanaa loo beddelaa matoorada raadinta.
The cinwaanka ugu weyn (h1) ee boggaaga ayaa miisaan culus ku dhex leh maadooyinka ay matoorada raadintu tilmaamayaan. Meeleynta hight (est) muuqaal ahaan HTML waxay sidoo kale saameyn ku yeelan doontaa tusmeynta.
Sida cinwaanka ugu weyn, a cinwaan hoosaad (h2) sidoo kale waxay saameyn ku yeelan doontaa tusmeynta bogga.
The cinwaanka boostadaada, ama cinwaano hoosaadyo dheeri ah ayaa saameyn ku yeelan doona waxa keywords iyo weedhaha la tiigsanayo iyo sida wanaagsan.
Ku celcelinta ereyada muhiimka ah iyo weedhaha muhiimka ah waxyaabaha ku jira waa muhiim. Erayadan muhiimka ah iyo weedhaha muhiimka ah waa in la falanqeeyo si loo arko inay yihiin ereyo muhiim ah iyo weedho muhiim ah oo laga yaabo in la baadho.
Erayada muhiimka ah ee la soo koobay iyo weedho muhiim ah ayaa waliba kaa caawin doona.
dheeraad ah cinwaan hoosaadyo (h3) sidoo kale way caawin kartaa waana miisaami kartaa in ka badan ereyada kale ee ku jira bogga waxyaabaha ku jira.
Ku adeegsiga weedho iyo ereyada muhiimka ah gudaheeda tag barroosinka (isku xidhka), sidoo kale waa hab fiican oo lagu wadi karo eraybixinta ereyga muhiimka ah iyo tilmaamaha keyphrase ee bogga. Ha ku lumin badeecadan qiimaha leh "halkan riix" ama "iskuxira"… halkii, u isticmaal cinwaanka iyo qoraalka si aad runtii u waddo xiriirka u dhexeeya xiriiriye iyo weedhaha muhiimka ah. Tusaale ahaan, haddii aan doonayo degelkeygu inuu la xiriiro suuqgeynta iyo tikniyoolajiyadda, waxaan jeclaan lahaa inaan hubiyo inaan isticmaalo:
Si la mid ah isku xidhka barroosinka, ku darida sumadaha cinwaannada iskuxirayaasha sawirku sidoo kale way caawin karaan. Maaddaama makiinadaha raadintu aysan tilmaami karin waxa ku jira sawirka (weli), ku darista cinwaanka ereyga muhiimka ah ayaa kaa caawin doonta wax badan - gaar ahaan haddii qof si fudud u adeegsanayo Raadinta Sawirka Google.
Magacyada sawirka waa muhiim. Hubso inaad isticmaasho jajabyada oo ha hoosta ka xariiqin inta udhaxeysa ereyada sawirka kujira. Hubina in magaca sawirku u dhigmo sawirka… isku dayaya in ereyada muhiimka ah lagu rakibo sawir aan khusayn ayaa dhaawici kara wax ka badan caawinta.
Tags: tag barroosinkaqoraalka calaamaddaqoraalkamagaca domainh1 tagh2 tagh3 tagcinwaanadaImagemagaca sawirkaOraahda muhiimka ahisticmaalka erayga muhiimka ahkeywordscinwaanka boggadhaji slugscinwaanka boostadacinwaan hoosaadyocinwaanka bogga
Fahamka R-da ee CRM
Febraayo 4, 2008 saacadu markay tahay 2: 01 AM
Marka laga reebo xaqiiqda ah haddii aad bartilmaameedsatay weedho muhiim ah oo khalad ah oo aad ku bilaabi lahayd, runti dhib malahan, waxaan u maleynayaa inaad inteeda badan heshay.
Shaqo aad u dhameystiran.
Febraayo 4, 2008 saacadu markay tahay 11: 08 AM
Nabbed! Erayada furaha ah ee aan xushay waxay ahaayeen kuwo adag oo muuqaal ah, SEO!
Febraayo 4, 2008 saacadu markay tahay 10: 09 AM
Garashada SEO-ga iyo ku sharxidda shuruudaha dadka waa laba xayawaan oo kala duwan. Iskuday sidaan doono, waxaan helayaa xoogaa aragtiyo wareersan markii aan isku dayo sida ugu fiican si aan u sharaxo waxa matoorada raadinta raadiyaan, sida isku xiridu muhiim u tahay, iyo sababta cinwaanada boggu muhiim u yihiin. Shaqadaydu waa inaan ku muujiyo fikradahaas qaab kooban, si fudud loo fahmi karo. Qoraalkani wuxuu si weyn ii caawiyaa. Shaqo wacan.
Febraayo 4, 2008 saacadu markay tahay 11: 09 AM
Mahadsanid, Dan! Waxay ii ahayd xoog waxaanan wali sii wadaa inaan isku dayo inaan saxo. Waxaan u maleynayaa inaan shaqsi ahaan ka fiicanahay, badanaa maxaa yeelay waxaan tarjumi karaa muuqaalka jahwareerka leh ee dadka aan la hadlayo.